" Heart Attack " ဖြစ်ခြင်းကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကာကွယ်ဖို. - Myanmar Myinkwin Zone
ပျံလွန်တော်မူပြီးနောက် ခန္ဓာဝန်ကိုပြန်လည်တူးဖော်စဉ် မပျက်မစီးပဲပြုံးယောင်သန်းနေတဲ့ ဆရာတော် အင်မတန်ထူးခြားပြီး ဖူးရခဲပါတယ်
လာဘ်လာဘ ပိတ်နေသူများအတွက် … လက်တွေ့ချမ်းသာ ရှင်သီဝလိ ဂါထာ
သွေးတိုးတတ်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ ဆယ်မိနစ်အတွင်း သွေးတိုးကျစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း ( ၅ ) ခု
Myanmar Myinkwin Zone
” Heart Attack ” ဖြစ်ခြင်းကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကာကွယ်ဖို.
November 25, 2021 December 5, 2021 admin
💔 နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ရှိသူတွေ
(၁။) အခုအချိန်က သင် အလုပ်မှာ အရမ်းပင်ပန်းလာပြီး အိမ်ကို တယောက်တည်း ပြန်လာတဲ့ ညဘက် ခုနစ်နာရီခွဲလောက်လို့ ဆိုကြပါစို့။
(၂။) သင်ဟာ တကယ်ပဲ မောပန်းနွမ်းလျ နေမှာပေါ့။
(၃။) ရုတ်တရက် သင့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာ စူးပြီးနာလာမယ်။ အဲ့လို နာနေတာကနေ သင့်ရဲ့ လက်မောင်း နဲ့ မေးရိုးတွေပါ နာသလို အောင့်သလို ဖြစ်လာမယ်။ အခြေအနေက ရုတ်တရက် ပိုဆိုးလာမယ်။ သင့်အိမ်နဲ့ အနီးဆုံး ဆေးရုံကလည်း သုံးမိုင်လောက် ဝေးနေတယ်။
(၄။) ကံမကောင်းစွာပဲ သင် ဆေးရုံကို ရောက်အောင် သွားနိုင်မလားဆိုတာ မသေချာဘူး ဖြစ်နေတယ်။
(၅။) သင်ဟာ အရေးပေါ်အသက်ကယ်ကုသနည်း (CPR) ကို သင်ဖူးပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လိုပြန်ကယ်မလဲ။
(၆။) တယောက်တည်းရှိနေချိန် ရုတ်တရက် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း (Heart attack) ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နှလုံးခုန်နှုန်းကလည်း ပုံမမှန် လူကလည်း သတိလစ်ဖို့ တစ်ဆယ်စက္ကန့်လောက်ပဲ လိုတော့တယ် ဆိုကြပါစို့။
(၇။) အဲ့လို ခံစားနေရရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထပ်ကာထပ်ကာ ချောင်းဆိုးခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ ချောင်းတခါ မဆိုးခင်တိုင်း အသက်ဝဝရှူပါ။ ချောင်းဆိုးရင်လည်း သလိပ်ထွက်အောင် ဆိုးနေရသလို ကြာကြာဆိုးပါ။ နှစ်စက္ကန့် တကြိမ်စီ အသက်ဝဝရှူလိုက် ချောင်းဆိုးလိုက် လုပ်နေပါ။ နှလုံးခုန်တာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အထိ ၊သို့မဟုတ် ကူညီမယ့်လူရောက်တဲ့အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
(၈။) အသက်ဝဝရှူတာက အဆုတ်ကို အောက်ဆီဂျင်များများရစေပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတာက နှလုံးကို ညှစ်ပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ဆက်ထိန်းပေးရုံသာမက နှလုံးခုန်နှုန်းပြန်မှန်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Heart attack ရနေသူတွေ ရုတ်တရက် မသေဆုံးပဲ ဆေးရုံကိုရောက်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
(၉။) သင် တတ်နိုင်သလောက် လူများများကို ပြောပြပေးပါ။ သူတို့အသက်ကို ကယ်တင်ရာရောက်ပါတယ်။
Credit မှတ်စုကြမ်း ၁၈
” Heart Attack ” ဖွဈခွငျးကို စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးကာကှယျဖို.
💔 နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ ရှိသူတှေ
(၁။) အခုအခြိနျက သငျ အလုပျမှာ အရမျးပငျပနျးလာပွီး အိမျကို တယောကျတညျး ပွနျလာတဲ့ ညဘကျ ခုနဈနာရီခှဲလောကျလို့ ဆိုကွပါစို့။
(၂။) သငျဟာ တကယျပဲ မောပနျးနှမျးလြ နမှောပေါ့။
(၃။) ရုတျတရကျ သငျ့ရဲ့ ဘယျဘကျရငျအုံမှာ စူးပွီးနာလာမယျ။ အဲ့လို နာနတောကနေ သငျ့ရဲ့ လကျမောငျး နဲ့ မေးရိုးတှပေါ နာသလို အောငျ့သလို ဖွဈလာမယျ။ အခွအေနကေ ရုတျတရကျ ပိုဆိုးလာမယျ။ သငျ့အိမျနဲ့ အနီးဆုံး ဆေးရုံကလညျး သုံးမိုငျလောကျ ဝေးနတေယျ။
(၄။) ကံမကောငျးစှာပဲ သငျ ဆေးရုံကို ရောကျအောငျ သှားနိုငျမလားဆိုတာ မသခြောဘူး ဖွဈနတေယျ။
(၅။) သငျဟာ အရေးပျေါအသကျကယျကုသနညျး (CPR) ကို သငျဖူးပမေယျ့ သငျ့ကိုယျသငျ ဘယျလိုပွနျကယျမလဲ။
(၆။) တယောကျတညျးရှိနခြေိနျ ရုတျတရကျ နှလုံးသှေးကွောပိတျဆို့ခွငျး (Heart attack) ဖွဈနတေော့ ဘယျလိုလုပျရမလဲ။ နှလုံးခုနျနှုနျးကလညျး ပုံမမှနျ လူကလညျး သတိလဈဖို့ တဈဆယျစက်ကနျ့လောကျပဲ လိုတော့တယျ ဆိုကွပါစို့။
(၇။) အဲ့လို ခံစားနရေရငျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ထပျကာထပျကာ ခြောငျးဆိုးခွငျးဖွငျ့ သငျ့ကိုယျသငျ ကယျတငျနိုငျပါတယျ။ ခြောငျးတခါ မဆိုးခငျတိုငျး အသကျဝဝရှူပါ။ ခြောငျးဆိုးရငျလညျး သလိပျထှကျအောငျ ဆိုးနရေသလို ကွာကွာဆိုးပါ။ နှဈစက်ကနျ့ တကွိမျစီ အသကျဝဝရှူလိုကျ ခြောငျးဆိုးလိုကျ လုပျနပေါ။ နှလုံးခုနျတာ ပုံမှနျပွနျဖွဈတဲ့အထိ ၊သို့မဟုတျ ကူညီမယျ့လူရောကျတဲ့အထိ ဆကျလကျလုပျဆောငျပါ။
(၈။) အသကျဝဝရှူတာက အဆုတျကို အောကျဆီဂငျြမြားမြားရစပေါတယျ။ ခြောငျးဆိုးတာက နှလုံးကို ညှဈပေးပွီး သှေးလညျပတျမှုကို ဆကျထိနျးပေးရုံသာမက နှလုံးခုနျနှုနျးပွနျမှနျအောငျ လုပျပေးပါတယျ။ ဒီနညျးနဲ့ Heart attack ရနသေူတှေ ရုတျတရကျ မသဆေုံးပဲ ဆေးရုံကိုရောကျအောငျ ကူညီနိုငျပါတယျ။
(၉။) သငျ တတျနိုငျသလောကျ လူမြားမြားကို ပွောပွပေးပါ။ သူတို့အသကျကို ကယျတငျရာရောကျပါတယျ။
Credit မှတျစုကွမျး ၁၈
Previous Previous post: ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးမိန်းကလေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသော အသက်၃နှစ်အရွယ် ချစ်စဖွယ်ကလေးမလေး
Next Next post: ဖဲကြိုးဖြူကမ်ပိန်းတွင်လှုပ်ရှားပါဝင်ခဲ့သည့် NUG မှ ဒေါက်တာ ဆာဆာာ
လက်ပံပွင့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကင်ဆာထိတောင်ပျောက်ပါတယ်ပြောတဲ့ ကရင်မကြီး
သင့်​ ခန္ဓာကိုယ်​ထဲက အသားဆက် အရိုးဆက် အကြောဆက်များပျောက်စေတဲ့ သဘာဝဆေးပင်
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/fe837a5/myanmarmyinkwinzone.xyz/wp-includes/functions.php on line 5107